Trenitalia Yakachipa YemaTeki Makikiti Uye Mitengo Yekufamba | Chengetedza Chitima
Trenitalia Yakachipa YemaTeki Makikiti Uye Mitengo Yekufamba
musha > Trenitalia Yakachipa YemaTeki Makikiti Uye Mitengo Yekufamba
Pano unogona kuwana ruzivo rwese nezve Trenitalia yakachipa tiketi uye Trenitalia yekufamba mitengo uye zvakanaka.
Topics: 1. Trenitalia neTreni Kukwirisa
2. About Trenitalia 3. Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Tensitalia Chitiketi Yekutengesa
4. Yakawanda sei Trenitalia matikiti anodhura 5. Maitiro Ekufamba: Sei zviri nani kutora Trenitalia, uye kwete kufamba nendege
6. Ndeupi mutsauko uripakati peSystem Ehupfumi, Premium, Bhizinesi uye Executive paTrenitalia 7. Kune here kunyoreswa kweTrenitalia
8. Nguva yakareba sei kusati kwasimuka kweTrenitalia kusvika 9. Ndeapi matanho eTrenitalia echitima
10. Izvo zviteshi zvinoshandiswa naTrenitalia 11. Trenitalia FAQ
Trenitalia neTreni Kukwirisa
Iyo Trenitalia kambani yakavambwa musi wa 1 Chikumi 2000.
mu 2005, ari Museve mutsvuku 1000, Trenitalia'samanga inononoka tambo yakatangwa. Iyo mhanyisa iyo Frecciarossa 1000 inosvika mazana matatu nemakumi matatu paawa.
Iyo huru nzira yepasi rose yechitima iri pakati peGeneva neMilan uye zvinotora 4 maawa akakwira Trenitalia.
Trenitalia inoshanda kure-kure masitima masevhisi uye kubatana uye mumatunhu zvitima kune chero muItaly.
Trenitalia high-speed chitima ibasa rinobatanidza kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba uye kumabvazuva kuenda kumadokero muItari uye zvakare Italy neSwitzerland, Furanzi, Ositiriya, uye Germany.
The trenitalia zvitima vari kufamba kusvika kuma 3oo km kweawa pane akakwirisa akakwira treni.
Mune chete 3 maawa iwe waigona kufamba kubva Milan kuenda kuRoma uye kubva Milan kuenda Bologna mukati 1 awa.
Enda ku Sevha Iyo Chitima Yeji kana kushandisa iyi yejeti kutsvaga anodzidzisa matiketi eTrenitalia
Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Tensitalia Chitiketi Yekutengesa
nhamba 1: Bhuka matikiti ako eTrenitalia pamberi apa sezvaunogona
Trenitalia matikiti zvinowanikwa pakati 2 kuti 4 mwedzi pamberi pezuva rekubva. Kuchengetera tikiti reTrenitalia pamberi iko kunovimbisa kuti iwe unowana matikiti anodhura ari mashoma. Matiketi echitima anokwira mumutengo sezvo iwe unoswedera pedyo nezuva rekufamba, saka kuitira chengetedza mari pakutenga kwako kwetiketi, kuraira sezvingabvira mberi.
nhamba 2: Kufamba naTrenitalia mune off-peak nguva
Matikiti eTrenitalia anodhura panguva yekuenda-peak maawa, pakutanga kwevhiki, uye mukati mezuva uye pakati pevhiki vhiki dzinofamba nzendo (Chipiri, Chitatu, neChina) kazhinji inopa mitengo yakachipa. Nemitengo yepamusoro, usatore zvitima zveTrenitalia mangwanani-ngwanani uye nekutanga kwemanheru pakati pesvondo (nekuda kwevazhinji vafambi bhizinesi). Ngwarira kana zvichikwanisika kutora zvitima zveTrenitalia musi weChishanu neSvondo manheru (zvinofarira vhiki dzevhiki kuwana) uye munguva zororo revanhu uye zvakare panguva dzechikoro nekuti pane zviitiko izvi mitengo yeTrenitalia matikiti Skyrocket.
nhamba 3: Ronga matikiti ako eTrenitalia paunenge uine chokwadi nezve yako yekufambisa chirongwa
Trenitalia inodzidzisa sevhisi iri mukuda kwazvo. Trenitalia Base tikiti rechitima rinogona kuchinjaniswa nekushandurwa pasina muganho uye iyo Economy Standard tikiti inogona kungogadziriswa kamwe chete pamberi pechitima zuva rekubva. Iwe haugone kuchinjana kana kudzorera mamwe matikiti eTrenitalia, asi pane maforamu pa internet aunogona kutengesa yako Trenitalia tikiti kechipiri ruoko. Sevha Yekudzidziswa kwechitima ye Kufamba kweTrenitalia ndeyekubhuka kana iwe uine chokwadi nezve yako yekufamba nguva.
nhamba 4: Tenga matikiti ako eTrenitalia paSave A Chitima
Sevha A Chitima ine chikuru chakapihwa matiketi echitima muEurope nepasirese, isu tinowana yakachipa Trenitalia matikiti. Isu takabatana nevazhinji vevashandi vechitima uye tekinoroji yedu yekudyara inokupa iwe nguva dzose yakachipa Trenitalia tikiti muItari nemisanganidzo yevamwe vatyairi vechitima kune dzimwe nzvimbo. Isu tinogona zvakare kuwana dzimwe nzira dzeTrenitalia zvitima.
Yakawanda sei Trenitalia matikiti anodhura?
Mitengo yetikiti yeTrenitalia semuenzaniso inogona kutanga pa € ​​21 panguva yekusimudzira asi inogona kusvika € 97 paminiti yekupedzisira. Trenitalia matikiti emitengo zvinoenderana nekirasi yaunosarudza uye heino tafura yekupfupisa yemitengo yepakati yekirasi kune yeRoma-Naples / Roma – Milan / Milan – Florence nzendo dzinofamba:
Maitiro Ekufamba: Sei zviri nani kutora Trenitalia, uye kwete kufamba nendege?
1) Kubatsira kweTrenitalia zvitima kunotanga nenyaya yekuti iwe unogona kubva wosvika wakananga pakati peguta mune chero ripi remaguta aunofamba uchibva. zvechokwadi, ichi chinhu chakasiyana kwazvo nezvitima, kunyanya kana iwe kudzidzisa kufamba kubva kuRoma, Milan, Florence, Geneva, kana Monaco, iyo inobatsira mukuru kuTrenitalia. Nekuda kwekuti rwendo rwacho rwakananga pakati peguta, iwe unodzivirira kuzviwisira mumigwagwa uye hapana chakaipisisa kupfuura kubatikana mumigwagwa uri kuzororo.
Kana zvasvika kuTrenitalia zvitiketi zvechitima mitengo, mitengo inowanzosiyana kazhinji. Kumwe kusimudzira kunokutendera iwe kuti utore matikiti ezvitima akadhura, asi mukati memazuva ekupedzisira kusati kwaenda, mitengo iri kuwedzera saka kana uchida kufamba mushe, Trenitalia ndeyako!
2) Kufamba nendege kune maitiro ekuchengetedza airport. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve uri mashoma 2 maawa usati waronga kuenda. NaTrenitalia, unofanirwa kusvika chete 30 maminitsi pamberi. wo, iwe unofanirwa kuenda kuairport kubva mukati meguta. saka, kana iwe ukaverenga iyo rwendo rwese rwendo, Trenitalia inogara ichikunda munguva yakazara yekufamba uye zvakare mumutengo kana iwe ukaverenga nguva yako semari.
3) Dzimwe nguva mitengo yeTrenitalia yetikiti yakakwira kupfuura nendege pane kukosha kwetiketi, asi kuenzanisa kunofanira kusanganisira kuti zvinoda iwe marii kutora chero nzira dzekutakura kuenda kuairport. kunze, mune zvimwe zviitiko, iwe unowana zvakare nguva yekuzorora kana vachifamba nezvitima zveTrenitalia uye pakupedzisira neTrenitalia, hauna mari yemachikwama.
4) Pakupedzisira, Ndege ndechimwe chezvikonzero zvekusvibiswa kwemhepo, padanho rekufananidza, Trenitalia zvitima ndizvo zvakawandisa nharaunda ine hushamwari, uye kana iwe uchienzanisa ndege kune rwendo rwechitima, kufamba kwechitima ndeye 20x yakaderera kabhoni yakasviba pane kuita ndege.
Ndeupi mutsauko uripo pakati peiyo Standard Economy, Premium, Business, uye Executive paTrenitalia?
Trenitalia inopa akati wandei matikiti ekirasi maseti akavakirwa chero bhajeti uye rudzi rwemufambi, kunyangwe iwe uri bhizinesi rekufamba, zororo, kana vaviri.
Musiyano mukuru pakati peTrenitalia chitima chekirasi makirasi kusagadzikana kwekushandurwa kwetiketi, mitengo, uye masevhisi. Uyezve, Tikiti reEconomy yechitima ndiyo yakachipa uye yakachinjika nzira yekufamba muItaly.
Standard Ehupfumi Trenitalia Matikiti:
The Trenitalia Standard Ehupfumi chitima tikiti ndiyo yakachipa pane yese Trenitalia fares. Zvakanakisisa kubhuka iyi tikiti rechitima pamberi nekuti matikiti epasi mutengo wakaderera – vanotengesa nekukurumidza. Vafambi vanobata tikiti yepaTeki yechitima vanogona kutora masutukesi anokodzera munzvimbo yezvokutakura, zvemahara uye vanogona kukanzurisa tikiti ravo rechitima vasati vaenda uye vanogashira mari shoma (kubviswa mutero we 20%).
Ehupfumi Premium Trenitalia Matikiti:
Iyi tiketi yezvitima zvechitima inonyanya kudhura kupfuura iyo Trenitalia tikiti yemhando, ari Ehupfumi Trenitalia Premium tikiti inopa mamwe mabasa. Mhando iyi yetikiti rechitima inowanikwa muTrenitalia yakakwirira-anomhanya zvitima uye inobvumira kuchinja kwenguva uye zuva chete kamwe zuva risati rasimuka..
Kuwedzera kune zvakanakira Standard matikiti echitima, Trenitalia Economy Premium matikiti anopa zvigaro zvakanaka nezvakawanda legroom uye akatsenhama zvigaro parwendo rurefu-rwendo. Pamusoro pazvose, pane matatu emamenyu ezvikafu aungasarudze uye chikafu chitsva uye zvinwiwa zvinozopihwa kuchigaro chako pane zvitima zveTrenitalia.
Bhizinesi Treintalia Matikiti:
The Trenitalia Bhizinesi tikiti vatengi vanogona kunakidzwa nezvakanakira zvese zvatakanyora pamusoro zvakadaro, vafambi veTrenitalia Bhizinesi Premier vanobatsirwa nemabhegi mazhinji emikwende, yakagadzikana ergonomic ganda zvigaro, yakawedzerwa legroom, matatu emamenyu ekudya kusarudza kubva. Uyezve, une madziro ehupombwe uye nzvimbo yakanyarara munzvimbo dzeBhizinesi dzakatarwa pazvitima zveTrenitalia.
Executive Treintalia Matikiti:
The Trenitalia Executive tikiti vatengi vanogona kunakidzwa neese mabhenefiti ataurwa pamusoro apa mukuwedzera kune ergonomic yakagadzika zvigaro zvematehwe kuti vaise misoro yavo uye vanakirwe zvakanaka nemaonero eItari.
Kune here kunyoreswa kweTrenitaliamusangano?
Iko kune Pass yePasi, asi zvinongokurudzirwa senzira isingadhuri kana iwe ukaronga kudzidzisa kufamba pamusoro 14 mazuva, kunyoreswa kunobvumira kuongorora Italy nechitima kune akapfuura chaiwo. Pane 3 pasiti inowanikwa: nyore, Nyaradzo, uye Executive uye iwe unogona kusarudza huwandu hwenzendo dzinotangira kubva 3 kuti 10 uye sarudza mhando yechitima kubva yakakwira-kumhanya Frecce kuenda kuhukama uye EuroCity.
Kupasisa kunowanikwa mune pepa fomu uye kunofanirwa kuve kunoitwa mukati 11 mwedzi kubva pazuva rekutenga.
Nguva yakareba sei kusati kwasimuka kweTrenitalia kusvika?
Kuti utore Trenitalia chitima chako uye uve nenguva chaiyo, njanji inorumbidza kusvika 30 maminetsi treni yako isati yasimuka. Chokwadi isu kuSave A Chitima, tenda kuti inguva yakakwana uye unogona zvakare kunakidzwa nezvitoro nekuwana izvo zvinhu zvaunoda iwe rwendo rwechitima kuti uve wakasununguka sezvinobvira.
Ndeapi matanho eTrenitalia echitima?
Uyu mubvunzo wakaoma asi mumwe wekuti Chengetedza Chitima unogona kupindura zvakazara uye chaiyo-nguva. Muchidimbu enda kune peji rekumba kwedu, nyora mukutangira uye kwaunoda kuenda kuItari, uye iwe unogona kuwana chakanyanya Trenitalia zvitima zvirahwe pane. Trenitalia zvitima zvinomhanya sepakutanga 6 ndiri 11 pm manheru kubva kuMilan kuenda kuBoli, kujekesa mazhinji ezvitima zveTrenitalia zvinomhanya kusvika nguva dzamanheru nechitima chichienda yega yega hafu yeawa kana zvakadaro.
Izvo zviteshi zvinoshandiswa naTrenitalia?
Trenitalia inovhara zvese zveItari, zvisinei, nhepfenyuro huru dzenyika ndedzeMilan, Roma, Venice, Naples, Turin, Bologna, Geneva, Florence, uye Verona. Pane 11 zviteshi zvepasi rese: 5 Trenitalia zvitima zvezvitima muSwitzerland uye 6 nhepfenyuro muFrance uye vashoma muAustria neGerman neCroatia. Saka zviri pachena kuti unogona kufamba zvakanaka uye nekukurumidza kufamba nemuEuropean akanaka uye kuyemura maonero eItari pasina kana chinhu!
Chikamu chepakati chechitima muMilan chiri munzvimbo inonyanya kubatikana Piazza Duca d'Aosta. Chiteshi chechitima chakashongedzwa zvakavakirwa uye chakakomberedzwa nevaridzi. Saka paunenge wakamirira kukwira Trenitalia chitima iwe unogona kufamba-famba uye kuyemura izvo zvinoshamisa mapikicha.
Rome termini ndiyo imwe yenzvimbo huru dzechitima muEurope. Iyo iri pakati chaipo kubva pamabhati eDiocletian muRoma yekare. Mukova weiyo terminal unobva kuPiazza dei Cinquecento. Pane 29 mapuratifomu ari munzvimbo inochengeterwa uye yeTrenitalia's tiketi hofisi yemakiteshi.
Florence chiteshi chechitima, Santa Maria Novella, chinhambwe chinhambwe kubva kuDuomo uye kunakidzwa kwakakura muKare guta reFlorence. Chiteshi ichi chinodanwa shure kwechechi yaSanta Maria Novella ipapo nepamusuwo wayo. saka, iwe unogona nyore nyore kuba zvimwe zvishoma zvakanakisa nguva mune Old dhorobha, usati waenderera pane yako chinotevera chinhambwe muItari.
Naples terminal iri kumabvazuva kweguta Rekare. Kana iwe uri kuronga kugadzira zvimwe kusimuka-zuva kubva kuNaples kuna Pompeii kana Sorrento, ipapo iwe zvechokwadi uchamira paNaples chitima chiteshi chezendo rako rwechitima.
Kana iwe usina chokwadi chekuti ndeipi sitima yekusarudza mukati meguta rauri kushanyira, takaita pane yedu saiti Mitambo yose kune mazhinji emaguta makuru, saka algorithm yedu ichakutorera iwe chiteshi chaicho kuti ubude kubva uye kusvika.
Chii chandinofanira kuunza neni kuTrenitalia?
Zvakakosha zvakafanana kuzviunza iwe kuTrenitalia rwendo kwakakosha. Pamusoro payo ita shuwa kuti yako Trenitalia yekufambisa gwaro pafoni yako kana yakadhindwa uye pasipoti inoshanda inofanirwa-kuva uye nguva dzose zvakanaka kuva neinishuwarenzi yekufamba.
Ndeipi kambani inobata Trenitalia?
Trenitalia inowanikwa nehurumende yeItaly uye iri chikamu cheFS Italiane Group.
Trenitalia FAQ pane kwandingaende neTrenitalia?
Dunhu, zvitima zvemadhorobha uye enyika dzakawanda, Trenitalia zvitima zvinogona kutora iwe chero kupi muItaly uye kune dzimwe nyika dzakasarudzwa dzine miganhu neItari. Semuyenzaniso, neTrenitalia yakakwirira-anomhanya zvitima iwe unogona kuenda kuFrance neSwitzerland.
Ndeapi maitiro e boarding eTrenitalia?
Kuhodha matikiti echitima uye kukwira Trenitalia hazvina kumbobvira zvakapusa. Unogona nyore kutenga yako Trenitalia tikiti paminiti yekupedzisira online uye kusvika 1 awa pamberi pekusimuka kwechitima. Zvekubhodhi, zvese zvaunoda pasipoti uyezve kuratidza iyo PNR kodhi (6-kodhi). Kujekesa, iyo PNR kodhi inotumirwa kwauri muye email yekusimbisa email ne e-tikiti. Haufanire kudhinda tikiti rechitima kumberi nekuti inowanikwa panharembozha yako uye yakanamirwa kune email yekusimbisa, uye mutyairi wechitima anokwanisa zvakare kuratidza tikiti rako nemazita mune yakaipisisa kesi.
Ndeapi masevhisi paTrenitalia?
Zvitima zveTrenitalia zvine yakasarudzwa pa-chitima cafe-bara yakatsaurirwa kune zvinwiwa uye chikafu chisina kujeka. Menyu inosanganisira masangweji, chocolate machipisi, nezvikafu zvishoma, chokoreti mabara, kofi, chokoreti inopisa, uye tii uye iwe unogona kudya uye kunwa muresitorendi iyi mota mota kana tora zvawakatenga back to your seat. Kana iwe uchifamba muBhizinesi, Premium, kana Yekutanga kirasi iwe unogona kusarudza yemahara yekugamuchira chinwiwa kubva pane sarudzo ye 9 zvinwiwa zviripo uye zvinotapira, nyama, kana tudyo-isina gonzo. Pazvitima zvese zveTrenitalia, kune masimba slots padivi pechigaro chako.
Inonyanyobvunzwa Trenitalia FAQ – Ini ndinofanira kubhuka chigaro pamberi peTrenitalia?
Paunochengetedza tikiti yeTrenitalia, chigaro chinogovaniswa iwe pachako uye haugone kuchengetedza chigaro chakakosha kana uchiita basa. Kana paine zvigaro zvepachena kana iwe uri muchitima, unobvumidzwa kutenderera, shandura zvigaro, uye uve nenzvimbo dzakasiyana.
Iko kune WiFi internet mukati meTrenitalia?
Paunenge uchitenga Trenitalia matikiti pamberi, unogona kunakidzwa Yemahara WiFi internet pane ese Trenitalia frecciarossa mhando zvitima uye makirasi.
In mhedziso, kana wasvika pano, unoziva zvese zvaunoda kuziva nezve Trenitalia zvitima uye wagadzirira kutenga Trenitalia yepaiti yema tiketi pa SaveATrain.com.
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.